IPL : लय पाएको चेन्नाईलाई कोलकाताको चुनौती – WicketNepal
IPL : लय पाएको चेन्नाईलाई कोलकाताको चुनौती
Sakar Sedhain, २०७७ आश्विन २१, बुधबार १३:३७
युएईमा जारी १३ औं संस्करणको आईपिएल अन्तर्गत बुधबार २१ औं खेलमा महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नाई सुपर किङ्ग्स र दिनेश कार्तिकको कप्तानीमा रहेको कोलकाता नाइट राइडर्सबीच प्रतिस्पर्धा हुदैँछ। खेल नेपाली समय अनुसार रातिको ७:४५ बजे आबु धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियममा सुरु हुनेछ।
५ खेलमा ३ जित र २ हार बेहोरेको चेन्नाई अकंतालिकाको पाचौं स्थानमा छ भने कोलकाता ४ खेलमा समान २ जित र २ हारपछि अंकतालिकाको चौथौं स्थानमा छ।
कोलकाता : पहिलो खेलमा मुम्बईसंग ४९ रनको फराकिलो हार बेहोरेको कोलकाताले दोस्रो खेलमा हैदराबादलाई ७ विकेटले पराजित गरेको थियो। तेस्रो खेलमा राजस्थानलाई ३७ रनले पराजित गरेको कोलकाता आफ्नो चौथौं खेलमा दिल्ली विरुद्ध १८ रनले पराजित भएको थियो।
दिल्लीसंग २२९ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा २१० रन बनाएको कोलकाताको हार पछि कप्तान दिनेश कार्तिकको आलोचना भएको थियो। लगातार फ्लप ओपनर सुनिल नारायणलाई बारम्बार दिएको मौका ,ओएन मोर्गनलाई छैठौ नम्बरमा पठाउने निर्णय तथा डेथ ओभरमा वरुण चक्रवर्तीलाई बलिंग गराउने जस्ता निर्णयले कार्तिकको कप्तानीमा प्रश्न उठीरहेको छ। उनको सट्टा ओएन मोर्गनलाई कप्तानी दिनुपर्ने कुरा उठीरहेको छ। त्यस बाहेक टिमलाई ठूलो चिन्ता छैन। फ्लप ओपनर सुनिल नारायणलाई पुनः मौका दिईनेछ या छैन हेर्न लायक हुनेछ। कुलदिप यादब, सुनिल नारायण, प्याट कमिन्सको उत्कृस्ट प्रदर्शन टिमले देख्न्न बाँकीनै रहेको छ।
चेन्नाई : पहिलो खेलमा मुम्बई विरुद्ध ५ विकेटले विजयी भएको चेन्नाई त्यसपछि लगातार ३ खेलमा पराजित भएको थियो। राजस्थानसगँ १६ रनले, दिल्लीसगँ ४४ रनले तथा हैदराबादसगँ ७ रनले पराजित भएको थियो। चेन्नाईले पछिलो खेलमा पन्जाब विरुद्ध १० विकेटको सहज जित दर्ता गरेको थियो।
लगातार ३ हार पछि पनि लगातार आफ्नो खेलाडीलाई विश्वास देखाएका धोनीलाई पाँचौ खेलमा शेन वाटसनको फर्मले राहत दिएको छ। पन्जाब बिरुद्ध १० विकेटको जितमा टिममा खोट लगाउने पक्ष कम देखिएको थियो। वाटसन र डु प्लेसीको लय, मध्यक्रममा रायडुको आगामा। जडेजा, पियुच चावला,, शार्दुल ठाकुर, दिपक चाहर जस्ता बलरहरु पनि लयमा देखिएका छन्। ब्राभोको आगमनले टिम अझ सन्तुलित देखिएको छ। पन्जाब बिरुद्धको जितले चेन्नाई सकारात्मक देखिएको छ र लगातार जित दर्ता गर्दै आफ्नो शाख जोगाउन चाहनेछ। तर कोलकाताको बलियो ब्याटिंग लाइन अपमा चेन्नाईको बलिंग भने हेर्नलायक हुनेछ।
हेड टु हेड :- हालसम्म यी दुई टोलीबीच कुल २३ पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ जसमा चेन्नाईको दबदबा रहेको छ। चेन्नाई १४ खेलमा विजयी हुदाँ कोलकाताले ८ खेलमा जित आत्मसात गरेको छ। गत सिजन दुबै खेलमा चेन्नाईले कोलकातालाई पराजित गरेको थियो। चेन्नाई ७ विकेट र ५ विकेटले विजयी भएको थियो।
खेल हुने मैदान :- हालसम्म शेख जायद स्टेडियममा ६ खेल खेलिएको छ जसमध्ये समान ३-३ खेलमा पहिले ब्याटिंग तथा दोस्रो ब्याटिंग गर्ने टिमले जितेका छन्। पछिल्लो खेलमा मुम्बईले राजस्थानलाई यसै मैदानमा ५७ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो। चेन्नाईले लिगको उद्घाटन खेलमा मुम्बईसँग शेख जायद स्टेडियममा खेलेको थियो भने कोलकाताले हैदराबाद र मुम्बई विरुद्ध यसै मैदानमा खेलेको थियो।
औसत पहिलो इनिंग योगफल : १६८ (जारी प्रतियोगिताको पहिलो ६ खेलमा), चेज गर्दाको रेकर्ड : विजयी – ३, हार – ३, बराबरी – ०
टिममा हुन सक्ने परिवर्तन
कोलकाता :- अंकतालिकामा अघि बढ्न कोलकातालाई यो खेल महत्वपूर्ण रहेको छ। कोलकाताले आजको खेलमा राहुल त्रिपाठीलाई ओपनिंग गराउन सक्छ जसले पछिल्लो खेलमा दिल्ली विरुद्ध विस्फोटक पारी खेलेका थिए। सुनिल नारायणको खराब प्रदर्शन कारण टिमले बलिंग पक्ष मजबुत बनाउन लक्की फर्गुसनलाई स्थान दिनसक्छ। कप्तान दिनेश कार्तिकको खराब प्रदर्शन लिएर कोलकाता सोच्न बाध्य हुनेछ।
कोलकाताको सम्भावित ११ :- शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, नितिस राणा, दिनेश कार्तिक, ओएन मोर्गान, आन्द्रे रसेल, कमलेश नगरकोटी, प्याट कमिन्स, लक्की फर्गुसन/सुनिल नारायण, शिभम मावी, कुलदिप यादाव/ वरुन चक्रवती
चेन्नाई :- चेन्नाईले आफ्नो विजयी टोलिलाई मैदाज उतार्ने सम्भावना रहेको छ। धोनी टिममा धेरै परिवर्तन गर्न रुचाउदैनन्।
चेन्नाईको सम्भावित ११ :- शेन वाट्सन, फाफ डुप्लेसिस, अम्बाती रायडु, केदार जाधाव, महेन्द्र सिंह धिनी, स्याम करन, रविन्द्र जडेजा, ड्वेन ब्राभो ब्राभो, दिपक चहार, शार्दुल ठाकुल, पीयूष चावला
लयमा रहेका ४ खेलाडी
शेन वाट्सन :- सुरुवाती ३ खेलमा खराब प्रदर्शन गरेका वाट्सनले पछिल्लो खेलमा पन्जाब विरुद्ध ५३ बलमा ८३ रनको अविजित पारी खेलेका थिए। लगातार ३ खेलमा हार बेहोरेको चेन्नाईले उनको शानदार प्रदर्शनमा पन्जाबलाई पराजित गरेको थियो।
फाफ डुप्लेसि :- जारी सिजन ओरेन्ज क्यापको दौडमा रहेका फाफ चेन्नाईको प्रमुख ब्याट्सम्यानको रुपमा रहेका छन्। उनले जारी सिजन २८३ रन बनाइसकेका छन्। पछिल्लो खेलमा उनले पन्जाब विरुद्ध ८७ रन प्रहार गरेका थिए।
ओएन मोर्गन :- जारी सिजन राम्रो लयमा रहेका मिर्गानले हैदराबाद विरुद्ध ४२ रनको अविजित पारी तथा राजस्थान विरुद्ध ३२ रनको अविजित पारी खेलेका थिए। उनले दिल्ली विरुद्ध पछिल्लो खेलमा १८ बलमा ४४ रनको विस्फोटक पारी खेलेका थिए।
राहुल त्रिपाठी :- जारी सिजन पछिल्लो खेलमा आफ्नो पहिलो खेल खेलेका राहुलले दिल्ली विरुद्ध १६ बलमा ३६ रनको आक्रामक पारी खेलेका थिए।
१. ओएन मोर्गन लिगमा १००० रन प्रहार गर्नबाट मात्र १० रन टाढा छन् भने आन्द्रे रसेल १५०० रन बनाउन ५२ रन टाढा छन्। रसेल लिगमा १०० चौका प्रहार गर्नबाट ४ चौका टाढा छन्।
२. कोलकाताका कप्तान दिनेश कार्तिक लिगमा कप्तानको रुपमा १००० रन पुरा गर्नबाट ५३ रन टाढा छन्।
३. चेन्नाईका कप्तान धोनी लिगमा ४००० रन पुरा गर्नबाट ५१ रन टाढा छन्।
४. फाफ डुप्लेसिस लिगमा चेन्नाईको लागि २००० रन पुरा गर्नबाट ७९ रन टाढा छन् भने अम्बाती रायडु १००० रन बनाउनबाट ३७ रन टाढा छन्।